कोरोनाका उपचार गाँजाबाट हुनसक्ने वैज्ञानिकको निष्कर्ष ! यस्तो छ यथार्थ - Today Express
कोरोनाका उपचार गाँजाबाट हुनसक्ने वैज्ञानिकको निष्कर्ष ! यस्तो छ यथार्थ
in जीवनशैली, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य
अमेरिकी अनुसन्धानमा गाँजामा उपलब्ध टिएचसी (Tetrahydrocannabinol) पदार्थले कोरोना संक्रमितको उपचार हुनसक्ने प्रष्ट देखिएको छ । टिएचसीले खतरनाक इम्युन रेस्पोन्सबाट बचाउन सक्छ । जसका कारण एक्युट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम ९एआरडिएस०को शिकार भएका व्यक्तिलाई लाभ प्राप्त हुन्छ ।
प्रदेश २ को धनुषा सहित कोरोनाका एक हजार २०२ सङ्क्रमित थपिए, कुल ५३ हजार १२०,कोरोनाबाट ३३६ जनाको मृत्यु ! कहाँ कति थपिए संक्रमित ?
के केटीहरू हाँस्नु नै फस्नु हो ?